ny fomba mba handresy ny machine casino
ny fomba mba handresy ny casino jackpot
Ary whopping mandoa jereo ny $ 927 655 amin'ny hetsika 54 31 taona zavatra online poker pro Alexander Petersen nihoatra ny sehatry ny 387 mba handresy ny voalohany eran-Tany Andian-Poker volamena fehin-tànana, goavana $927655 handoa ny maso sy ny 2015 $10,000-Bilany Fetra Omaha Fiadiana ny tompon-daka Anaram-boninahitra hanome tanana amin'ny poker. Petersen bested Jason Mercier amin'ny loha-maso milalao ampifamadihina toa draharaha manomboka 3-1 chip isaina.
Ity no manamarika Petersen ny lehibe voalohany velona fandresena tamin'ny fifaninanana, ny vola voalohany ny tantara mitohy sy ny iray amin'ireo lehibe indrindra ny top loka mari-pankasitrahana ao amin'ny andian-dahatsoratra manohitra ny tsipika miavaka amin'ny farany ambony latabatra izay tafiditra Shaun Deeb, Davidi Kitai, ary Mercier."Ho avy mba Las Vegas foana aina ho ahy, miala milalao," Peterson nanazava ny fomba mba handresy ny machine casino. "Izany no zava-nitranga voalohany aho nilalao eto izay hitako tena nandray azy io ho zava-dehibe, ary nisy vokany tsara izany."Ny farany sivy vita ny:1 Alexander Petersen $ 927 6552 Jason Mercier $ 572 9893 Dan Smith $ 369 5644 Simona Trumper $ 267 7785 Mohsin Virani $ 196 8776 Steven Reichardt $ 146 8577 Davidi Kitai $ 111 1348 Shaun Deeb $ 85 3069 Hasan Habib $ 66 463 Online Casino Vaovao Natolotry ny Infopowa Ny olona amin ' ny drafitra eto amin'ny Casinomeister.
Bryan Bailey dia mihazakazaka Casinomeister hatramin'ny nanombohana azy tamin ' ny volana jiona 1998 ny fomba mba handresy ny casino. Efa nijery ny orinasa mitombo avy amin'ny primeval sehatra inona izany ankehitriny.
Ny Master no nanatrika efa ho 100 ny fihaonambe tao anatin'ny 20 taona, ary manana na efa mpandaha-teny na ny tontonana mpandamina farafahakeliny 60 zava-nitranga ny fomba mba handresy ny casino jackpot. Izy foana ny mpiaro ny fahamarinana sy ny antony ary dia fantatra ho toy ny alemana labiera, tsara Scotch, ary [email protected]
Maimaim-poana ny samp fampiantranoana 100 slots
Poker avy amin'ny teny frantsay ho malagasy
Stan blackjack fanafahana for sale
Paris tx ny choctaw casino